Baro sida looga shaqeeyo fog oo aad ugu xirnaato meheraddaada. Tababare Todd Dewett wuxuu kugula socodsiinayaa sida loo abuuro jawi shaqo oo wax soo saar leh gurigaaga adoo si habboon u qorsheynaya maalintaada, uga shaqeynaya meel gaar ah, iskana ilaalinaya waxyaabaha ku mashquulinaya. Marka goobtaada shaqada la dejiyo, waxay la wadaagaysaa hababka ugu wanaagsan ee lagula xiriiro kooxdaada. Ugu dambeyntiina, waxay ka hadlaysaa caqabadaha inta badan taleefoonnadu wajahaan: dareenka go'doominta iyo ka go'idda nolol maalmeedka ganacsiga, iyo isgaarsiinta dalwaddii.
Dibada ka shaqee Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Hay'adaha Yurub
horeAasaaska aasaasiga ah ee maaraynta mashruuca
socdaOgow sida loo maareeyo waqtigaaga